China Hot Sale ny haben'ny virijina zazavavindrano tsara tarehy Fountain with Holding Shell factory and manufacturing | Asa Atisan
Fivarotana mafana be habe amin'ny sary Mermaid vita amin'ny vatolampy Fountain with Holding Shell
Size: habe namboarina
Fitaovana: Varahina fahagola
Fonosana: Tranga hazo matanjaka
Serivisy: ampanjifaina ekena
Fandoavana: T / T, Credit, Western Union, Money gram, PayPal
FOTOTRA: Loharanon'ny sary sokitra mermaid Bronze
Fanohanana ara-teknika an-tserasera, fametrahana eo an-toerana
Drafitra modely 3D, vahaolana tanteraka ho an'ny tetikasa
loharano mermaid loharano
Varahina, varahina, varahina
Raharaha hazo mahazatra noondrana
Voalamina + Nomem-boninahitra
Fivarotana mafana be dia be ny loharano volo vavy Mermaid miaraka amin'ny Shell
Detaile sary sokitra zazavavindrano
Sarivongana mermaid avo lenta avo lenta dia namboarina ho an'ny zaridainanay mpanjifa amerikana. Mikasa ny hametraka an'io sary sokitra io ao amin'ny zaridaina any aoriana izy ary azo ampifandraisina amin'ny loharano misy rano amin'ny loharano kely. Ireo tovovavy mermaids roa dia voahodidin'ny fomba mazava sy mahafinaritra.
Tombony amin'ny sary vongana varahina
Ny sarivongana varahina dia manamboatra lasitra mahazaka hafanana ambony toy ny bobongolo vita amin'ny plastera marefo na bobongolo fasika, izay mazàna sosona anatiny sy ivelany. Ny rano varahina dia araraka ao anaty lasitra avy eo amin'ny volon'afo ary hampangatsiaka mba hamorona.
Noho ny toetra mampiavaka ny sary sokitra varahina dia manana toetra maharitra izy io. Ny sary sokitra varahina dia manana fahatsapana mavesatra, satria ny sary sokitra an'io sary io dia mety haneho taratra ny toetran'ny olona. Ankoatr'izay, ny sary sokitra varahina dia mora kokoa ny hitehirizana ary tsy ho lany andro amin'ny fotoana.
Fampiharana sary vongana varahina
Miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainana, mitombo ny fangatahana sary sokitra varahina, ary mitaha ny androm-piainan'ny sary sokitra varahina. Ela sy mora alamina, matetika dia mety mitana andraikitra lehibe amin'ny fandaminana zavakanto sasany. Na eo afovoan-tanàna na amin'ny zaridaina any aoriana, ny sary sokitra mermaid varahina dia safidy mety.
Ekeo ny fanaingoana
Amin'ny maha-orinasa mpanao sary sokitra manana traikefa an-taonany maro dia manana talenta serivisy tsara sy matihanina matihanina izahay. Ny vokatra rehetra ao amin'ny galeriantsika dia azo namboarina, tsy maninona ny habe na ny takian'ny lokoo, azontsika atao ny mihaona amin'izy ireo.
Description: Fivarotana mafana be dia be ny loharano volo vavy Mermaid miaraka amin'ny Shell
Akora: Bronze / Copper / barahina
Size Range: Haavo mahazatra 1.3M ka hatramin'ny 1.8M na namboarina
Lokon'ny loko: Loko orina / shinny volamena / maitso / mainty
fikarakarana: Alatsaho amin'ny Polishing Surface
Faharetana: manan-kery miaraka amin'ny maripana manomboka amin'ny -20 ℃ ka hatramin'ny 40 ℃. Manalavitra ny havandra, andro be orana matetika, toerana be lanezy.
asa: Ho an'ny efitrano fianankaviana / trano / monasitera / fane / scape an-tany / toerana lohahevitra sns
Payment: Mampiasà fiantohana ara-barotra hahazoana sitraka fanampiny! Na amin'ny L / C, T / T
Previous: Ny zaridaina maoderina dia mijoro miaraka amina peratra vato marbra frantsay
Manaraka: Varotra mafana haingon-trano vokatra zaridaina rano loharano kerobima marbra
sary sokitra vehivavy tsara tarehy varahina zaridaina ivelany ...
Handravaka ivelany zaridaina marbra mini rano fou ...
Garden haingon-trano marbra fotsy sary sokitra rindrina ...
tanana sinoa voasokitra foun rano rano haingo ...
Vato marbra dobo filomanosana anaty rano be ...
Vato voajanahary Shinoa zazavavy eny ivelany eny ...